Madaxweynaha Turkiga oo uga baaqay dunida Muslimka ah in ay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Turkiga oo uga baaqay dunida Muslimka ah in ay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada
IStanbul:-Madaxwynaha dalka Turkiga Rajeb Dayid Erdogan ayaa uga baaqay dunida Muslimka ah in ay u midoobaaan dagaalka lagula jiro argagixisada.
“Muslim ahaan, Waxaa inoo yaala howl muhiim ah inaan bar-bar istaagno dagaalka ka dhan ah kooxaha argagixisada sida Daacish, Al-qacida, Boko Xaram iyo Al-Shabaab kuwaasi oo waxyeelada uga weyn u gaysanaya Muslimiinta iyaga oo adeegsanaya magaca Islamka” sidaas waxaa yiri Madaxweyne Erdogan oo ka hadlayey munasabad ka dhacday Istanbul shalay.
Madaxweynaha ayaa yiri “Muslimiinta waa in ay door-weyn oo muhiim ah ka ciyaaraan difaaca diintooda oo uu sheegay in si xun loo adeegsanayo, haddii aan Muslimiinta waxba ka qaban oo ah iney ka hortagaan ururada argagixisada dhamaan fara-gelinta saamaynta ku leh diinteena waa ay soconaysaa ayuu ku daray hadalkiisa”.
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale aad u weeraray siyaasadda dawlada Ruska oo iyada qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacish oo ku xooggan dalalka Syria iyo Ciraaaq, si gaar ah joogitaan Ruushka ee dalka Syriya, waxaana labadan dowladood weli ka dhex taagan khilaaf ka dhashy diyaarad dagaal oo uu Ruushka lahaa ou uu Turkiga soo riday bishii hore.
Waxaana hadalka Madaxweyne Erdogan uu imaanayaa xilli sannadkan 2015 ee dhamaanaya oo kaliya ay ururada agagixisada Daacish, Boko Xaram iyo Al-Shabaab ay gaysteen dilal kumanaan kun oo badankood ah Shacab muslimiin ah oo waxba galabsan, balse lama oga jawaabta ay ka bixin doonaan dunida Muslimka ee uu baaqa u diray, madaxweynaha Turkiga
Inkasta oo 34 dal oo ay Sacuudiga horumuud u tahay ay sheegeen horaantii bishan in ay yeesheen isbahaysi la dagaalamaya kooxaha argagixisada.
WD: Maxamed Cisman Cabdi “Black Cobra”
Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta oo ka hadashay habka wadaaga wax soo saarka kheyraadka dalka